What Doesn't Kill Me — Trip LEE
Chii Ko kundiuraya
Kana muri achipfuura nguva yakaoma, vanhu havasi kuziva zvokutaura. Mhedzisiro maturo clichés kana trite kuedza ufare. Ndagara vaiva nechinetso Cliche phrases- nekwaiitwa hazvirevi chinhu munhu achiti kwavari uye regai chaizvoizvo kubatsira munhu achivateerera. One zvinhu zvakafanana, "Chin kumusoro" uye "Zviri unenge zviri nani." Chaizvoizvo? Unoziva sei? Usingaiti shamwari dzako chero nyasha nokuvapa chiedza, fluffy tariro dzisina midzi chinhu. chokwadi chakasimba kuti apo yakadzika marwadzo Hits tinofanira zvizununguke kuraramisa.
Paaiita Kumbonetswa yake kenza, Christopher Hitchens vataura kushungurudzwa zvakafanana nevamwe maturo zvirevo tikakandira kumativi. Iye anopedza mapeji mashomanana uchirwisa mumwe wavo mubhuku rake rinonzi, Rufu. Anoti, "Zvikuru sei, Ndakarega akadzika chiziviso kuti zvishoma 'chero asingadi kuuraya ini anondisiya nesimba.' "Anoenderera mberi achiti, "In mhuka mumuviri nyika ... pane zvose vakawandisa zvinogona kuuraya iwe, Usauraya iwe, uye ipapo kukusiya zvakati simba. "Hakugoni chete unonzwa mufaro?
Zvinoita mwoyo, asi ndinofunga Hitchens zvakarurama mupfungwa. Zviri ingangodaro tinogona kuenda kuburikidza nezvinhu zvakaoma kuti chete simba akatibata kunotiswededza pedyo rufu. Ndinogona kufungidzira munhu achibvunza mubvunzo, “Sei chinhu ichi chakaipa kwazvo kuti ini akasimba?” Kunyange zvakanaka vanhu vanogona kuputswa pasi utsinye nyika yedu vafa. Netariro anogona chete kupukunyuka kurohwa zhinji kudaro kusvikira kwatanga, uye chokwadi pakupedzisira chinovhunga kunze. Mashoko kuti kamwe yakarira akanaka zvino sokuti maturo. Asi ndiro tsime-zvichireva manzwiro Hitchens akarwisa nokusingaperi vechokwadi? Ndofunga kudaro.
"Chii chisingaratidzi kundiuraya zvinondirwadza akasimba" rinogona kuva yechokwadi, asi chete kana pane zvinopfuura upenyu huno. Kana upenyu huno, ino, uye muviri ichi zvose pane, Hitchens zvakarurama. Hazvina inhema. Zvaizova zvakafanana achiti, "Chii chisingaratidzi ingasvika motokari yangu zvinoita nesimba." Ndizvo pusa. Ungave kuti kufuratira chokwadi kudavira kuti. Asi kana miedzo yedu duku mune husingaperi zvaanoreva dzimwe mhando naro anoshandura zvose.
Pauro anotiudza, "Zvinhu zvose zvinobata pamwe kuti zvinakire avo vanoda Mwari uye vakadamwa maererano nezano rake." Ndima iyi ndiyo nguva aishungurudza, asi zviri chimwe zvipikirwa yakaisvonaka yose Rugwaro. Izvi hazvirevi kuti vaKristu risingakundiki. Tose nemiedzo, asi hatigoni pakupedzisira kukundwa navo. Kunyange vavengi vedu rakaipisisa, kufanana kutambura uye rufu, vave shamwari dzedu muna Kristu, nokuti pakupedzisira kushanda tsitsi dzedu.
Saka sei chaizvo chaizvoizvo vanogona miedzo izvi pokudengenyeka kutiita kusimba? Hedzinoi nhatu (pamwe zvinokosha bindepinde):
1. Ivo kutiita kuvimba naJesu
Pandinonzwa sokuti zvose muupenyu hwangu chinoenda zvakanaka, mwoyo wangu pakarepo vanotiza kupinda kuzvidzora kuyanzva. It harumboperi. Ini kutanga kunyengetera zvishoma nokuti ini asingafungi zvakakwana zvokufungidzira handina chinhu chamakashayiwa. Ndava vanozvikudza nokuti ndinofunga ndiri chikonzero zvose kuenda zvakanaka. Munguva idzodzo, Ndiri kukanganwa kuti Mwari ndiye mupi zvipo zvakanaka, uye ndichiri kuda kuti andibatsire. Ndiri kuzvitutumadza kuti ndine akanzi zvose dzake.
Asi kana miedzo kwatingava, vanoratidza isu utera hwedu pachedu. Urwere anoyeuchidza kukosha kwedu, akarara-offs anotiyeuchidza kuti basa nesimba hakurevi chinhu, uye kunetsana anotiyeuchidza kuti tinofanira Jesu ose nharaunda hwedu.
2 Corinthians 12 ndiko nyaradzo kwandiri munguva muutera. Pauro anoziva kuti Mwari akamupa muedzo "rambai [iye] asava vhaira. "Akati anodada nomufaro muutera hwake, uye kuti iye kugutsikana nemarudzi ose nemiedzo. Pauro aigona sei kugutsikana uye kunyange akafara pamusoro nemiedzo yake? Ndinofunga Pauro ari kutaura kuti miedzo iyi pachena kuti iye inoda nyasha dzaMwari uye simba. Self-nedoro utera, uye kuvimba Kristu ndiye simba. Saka Pauro anoti, "Pandinenge ndisina simba, ipapo ndine simba. "
2. Ivo tive saJesu
Isu hauzokwanisi kutsungirira miedzo pokudengenyeka kusvikira tikaziva kuti nyaradzo yedu uye utano hwakanaka haisi chii chinonyanya kukosha. Nyaradzo uye utano zvinhu zvakanaka kuti Mwari anofarira kupa kwatiri. Asi naMwari chinonyanya kuda upenyu hwedu kuti taizova saJesu. Uye Iye aitoda kushandisa miedzo kuita kuti. Hebrews 12 anoti, "[Mwari] anoranga nokuda kwedu zvakanaka isu, kuti tinogona kugoverana utsvene hwake. "Training raMwari yokurovedza muviri anogona kukuvadza dzimwe nguva, asi Achaita kuti tive vakasimba.
James 1:2 chinouya mupfungwa, kwaakanga anotiudza kuti "zvitorei zvose, hama dzangu, kana ukasangana nemiedzo yakasiyana-siyana siyana…"Chikonzero tinofanira zvitorei ndiwo hunhu sohwaKristu inobereka. Kuzvininipisa kwedu kunokosha kupfuura mufaro wedu. Zviri nani kuva mumuviri simba uye simba mune zvokunamata.
3. Ivo tive refu kuva naJesu
Mwoyo yedu simba chivi, uye kazhinji isu tichimanikidzwa kupanga zvakawanda ino kupa. Asi kana kwekanguva mufaro ino yakatorwa kubva kwatiri, tiri vakayeuchidzwa kuti Nyika haisi musha wedu. vagari yedu kumwewo.
Ndinofarira kugara zvakanaka Hotels, uye kana ini ndinoedza kushandisa zvose perks. Asi zvino ini atanga kurega mukadzi wangu, ndobva kuona handina mbatya Ndaireva kuunza, ndobva kuziva nzvimbo basa iri pamusoro hafu sezvinoita mudzimai wangu kubika. Rinondiyeuchidza kuti hotera iri harisi musha wangu. Unmet nokuchiva kundiita refu pamba. pasi rino harisi apo tiri, uye miedzo anotiyeuchidza kuti paradhiso edu kumwewo, naIshe wedu. Pachange pasina zvido unmet Kudenga, nokuti Ishe wedu achagutsa dzose zvishuvo zvedu. Achazviita tinobvisa marwadzo ugodira nyasha dzake pamusoro pedu kunze nokusingaperi.
Saka nguva inotevera une shamwari achipfuura rokubvisa nguva, kuvayeuchidza kuti kunyange mamiriro ezvinhu anogona kuita kuti tive vakasimba. Kwete kuburikidza mafungire uye netariro, asi kuburikidza tariro chaiyo uye chaiyo chinja. Uye paunenge achipfuura mwaka yakaoma, ngazviitike pedyo Kristu. Usatya, Ishe unewe.
tariro mutendi ari mhiri guva, neinotevera upenyu tichasangana kufanana uye naye. Saka kunyange chii anouraya isu tive nesimba.
emr • Gunyana 17, 2013 pa 2:06 pm • pindura
shamwari • Gunyana 17, 2013 pa 2:25 pm • pindura
Thanks rwendo, kuti ndizvo chaizvo zvandange ndichida kunzwa izvozvi. Achipfuura nakisa yakaoma nguva uye kutendeka kwake kunyaradza vana vake haambokundikani kwandiri katyamadza.
kwena Albert • Gunyana 17, 2013 pa 2:39 pm • pindura
Awesome piece.I huchatsvaira zvatinosiita cliches uye pachinzvimbo mazano avo vari kurwadziwa kubvira nhasi zvichienda mberi kutarira mberi kune padombo rakakwirira kupfuura i..Thank iwe changamire
Michael • Gunyana 17, 2013 pa 2:55 pm • pindura
Izvi zvakanga zvishoma zvinoshamisa kuverenga. Ndakanga kumbogara ndafunga pamusoro zvakanaka mashoko ari kunaka ezvinhu ari chakaipa. asi, zvakare, zviri kuburikidza Mwari akudzwe kuti tinogona kutarisira kuburikidza vakaoma nguva uye kuti pane chimwe chinhu chikuru kupfuura ino. Ko haana kundiuraya, kana anoita, Anondivatisa akasimba nokuti kundiswededza pedyo naMwari.
Franky • Gunyana 17, 2013 pa 3:41 pm • pindura
Mr. Tripp Lee
Ini ndapepuka ichi mangwanani kunzwa manyawi uye worudzii rokuvaudza vanotenda kuti sezvo zvinhu zvikuru muupenyu hwangu vakanga vachienda kukuvara, ipapo ini havafaniri kuvimba Mwari kunyange zvakawanda. Ndakanga zvakaipa uye vakayeuchidzwa nayo zvikuru pakarepo sezvo zuva mberi mberi. Ndinokutendai nokuti njere dzako saizvozvi uye ndinonamata Jehovha uchandiporesa kuratidza Grace vachinditakura kubva apo ndiri.
munin'ina wako muna Kristu
raenee • Gunyana 17, 2013 pa 6:06 pm • pindura
Dear Mr.trip Lee,
I chete rudo ichi (: Ndine mubvunzo chechi yangu kuita dzakatevedzana “chii panyika ndiri pano nokuda?” N IM pamusoro voujaya vatungamiri uye Ndinenge kuita chidzidzo mudzidzi uye zvose zvamataura ukama mune zvakakwana kukonzera pamusoro zvikamu zviri zvichienderana mwari panguva mudungwe munzira… saka kana kwayo zvakangonaka ndaigona kushandisa zvimwe zvinhu zvenyu? Kufanana Lil prices kana magwaro asi chete pamwe permisson wako …. I Akanyatsofunga kuda zvinhu kwenyu uye yaro diffently achindibatsira kukura sezvo vaKristu (: Ndinokutendai nokuti munhu waMwari N kukudza kudanwa kwenyu kupinda pakuparidza. Gods gonna kuita zvimwe zvinhu simba muupenyu hwako uye familys hwako upenyu (:
Joel • Gunyana 17, 2013 pa 6:39 pm • pindura
Ndinokuda okugumburisa.. Ndinodavira chaizvoizvo BRO!
GabeTaviano • Gunyana 17, 2013 pa 6:47 pm • pindura
Aratidza ine makore maviri ane, uye this post ari akarurama anobuda chokwadi vakatendeseka. Zvakawanda zvinodiwa ichi baba vasikana vatatu, uye murume kuti munyori uye mukurukuri ane mashoko zvachinja kubva matambudziko muwanano uye amai pakuita apo vose anoita akarasika.
njanji Your, Ndonzwa mushe, kwave yangu dingindira rwiyo maviri apfuura, rwendo. Handisi crank chero rwiyo kwazvo, uye handina kukwanisa kubvunza Mwari kunyora mashoko akataurwa zvakadzikadzika kuti mweya wangu. Pane nguva apo kunyange zviduku kuzviuraya akayambuka pfungwa dzangu. Imi chokwadi sokuti uri muhondo kana kuti ndicho chokwadi kutendeseka.
Asi tariro chaiyo uye chaiyo nokuchinja zviri zvikuru zvakakodzera pane kurega. Ndicho chokwadi kuti. Pane kurwa kuti akarwira mumwe nomumwe wedu. Ndinoonga iwe nokutora nguva kunyora mashoko aya, rwendo. Ndinenge kuverenga kuburikidza this post dzimwe kakati. Kurumbidza Mwari kutaura kuburikidza kwamuri earbuds dzedu, pachikuva, panguva papurupiti, mumba mako, uye padandemutande.
Liam • Gunyana 17, 2013 pa 8:17 pm • pindura
rwendo, chengeta kunyora murume! Your okupedzisira maviri namagwatidziro kunge akataura chaiyo apo ndiri panguva muupenyu uye ndava kuzviwana chete pandaida. Mwari ari Hapana mubvunzo kushanda kuburikidza iwe.
Carlota • Gunyana 18, 2013 pa 12:50 ndiri • pindura
Zvamakataura ane kundibatsira kunzwisisa somethings uye kuchareva alot kwandiri. Shoko anorondedzera alot nezvinoitwa Ndave kuenda kuburikidza inenge 5 makore vachiri kuenda kuburikidza now.Thank iwe rwendo Lee.
Tendekai • Gunyana 18, 2013 pa 4:06 ndiri • pindura
zviri zvechokwadi yechiKristu anofamba nokutenda uye kwete sight.i hwave dzakaoma; apo zvose zvakanga Mafambiro pamusoro expectations.It wangu akava kunyange zvakaoma kuchengeta rangu kuvimba naJehovha asi nokuti ndaiziva kuti marwadzo ndakava kwaiva kwenguva duku uye zvakagadzirirwa kuti ini akasimba kwete kuparadza me.i musi Jesu uye pano ndiri ini vakakunda.
Charles • Gunyana 18, 2013 pa 4:11 ndiri • pindura
Ndinofunga une chidimbu ichi ine zvakawanda chokwadi. Zvechokwadi ave mutendi ipi kundiuraya kana anongogona kunondiita akasimba. Mwari akuropafadzei uye kukupa uchenjeri kutaura zvakawanda chokwadi vanhu vake.
Kathryn • Gunyana 18, 2013 pa 9:31 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti shoko iri. I chaizvoizvo vakandikurudzira nekuti ndave kuva yakaoma nguva yokuti kumativi 12 makore, achitambura ane kumbonzwiwa chirwere uye chaizvoizvo ndinoda ukama hwangu naMwari. Ndiri panguva apo mazuva ano ndinongonzwa bindira kuti manzwiro, asi ndinotenda kuti Mweya Mutsvene ari kukurudzira ini kuvimba naJesu uye kuvimba naye.
Amanda • Gunyana 18, 2013 pa 11:03 ndiri • pindura
Kwakadaro chinoziva mumhanyi uye chaizvoizvo kunokubatsira zvinhu nenzira, chete akarasikirwa mukoma wangu 3 ago kune vakawanda myeloma uye yangu naamai vari kwazvo nzendo dementia ndinoziva kuti kuva kutsungirira Ndine kuwana simba rangu kuna Mwari, uye kufara kuti zuva asati kupfuura iye regai omuendesa Ishe uye akapa upenyu hwake. Ramba wakadaro rakanaka, uri kutuswa kwangu 18 gore mwanakomana yekare kunyora mumhanzi uye kufambirana piyano ake, gara wakakomborerwa!
Corrie Reynolds • Gunyana 18, 2013 pa 11:13 ndiri • pindura
Iwe nguva dzose vane nzira kuisa mashoko chii Ndinofunga asi ndiri kutadza kunyora. Une matarenda vechokwadi vakawanda. Ndinokutendai kushandisa nokuti chii makadanirwa kuita. Mwari vakuropafadzei mukoma.
DeniseSheppard • Gunyana 18, 2013 pa 12:08 pm • pindura
Mr. Barefield…….uri zvinoshamisa, Muenzaniso rwaMwari unopenya. Akakomborera kwamuri lyric kuudza rake. I tiudzewo kuverenga chii iwe nyora, mimhanzi yako uye anoda kunzwa iwe anenge nguva. Thanks sevashandi vanoteerera mukuzivisa mashoko aMwari; nguva dzose, zvakanaka, manyukunyuku nezvakarurama papfungwa! Good Komborerai You Brother!
BrandonPulley • Gunyana 18, 2013 pa 12:30 pm • pindura
Ndakarasikirwa basa rangu nhasi uye handikwanisi kukutaurira sei zvakawanda mhinduro munyengetero uyu! Ndabva Ndakaramba kushevedzera kundiudza zvokuita kundiudza Ndapota. Ikozvino ndinoziva. Ndinoda kugara kuzvininipisa uye kuziva rakatevera basa anopa ini kubva kwaari kwete nemabasa angu!
Harry Nanthambwe • Gunyana 18, 2013 pa 3:24 pm • pindura
Izvi HS chii ndinogara kuda 2 inzwai uye verenga. Praise Mwari 4 U bhurezha.
Tendai • Gunyana 18, 2013 pa 7:41 pm • pindura
Izvi zvinokurudzira zvinhu, hanzvadzi konama. Ndinokutendai nokuti ini achiyeuchidza vhangeri; nheyo upenyu ose echiKristu.
Gomezgani inoti • Gunyana 19, 2013 pa 12:46 pm • pindura
Debbie • Gunyana 19, 2013 pa 9:09 pm • pindura
tsananguro Your madzibaba edu zvarinoreva nguva dzose ndipei kunzwisisa. Mazvita rwendo uye ndapota uchibatsira kuvhura meso angu.
Taurai: Daily Pfuma | sepfuma Kristu
Paul Sembereka II • Gunyana 21, 2013 pa 5:19 ndiri • pindura
Amen, Zvikomborero kwamuri.
Bobby • Gunyana 22, 2013 pa 9:52 pm • pindura
Sunge • Gunyana 24, 2013 pa 3:30 pm • pindura
Amen. Ndinokutendai zvikuru kuti mweya akazadzwa wako nhungamiro uye nokudzidzisa. Love Blog ichi!
Kaila • Gumiguru 3, 2013 pa 2:58 pm • pindura
Ndinobvumirana kuti kazhinji nguva apo vanhu kupa mashoko iwe kushandiswa, havasi nguva dzose kuti unzwe zviri nani. mhuri yangu uye ndaratidzwa kuti chirimo uyu pamariro munin'ina wangu. Iye akapfurwa uye akaurayiwa munhu akasarangarira shamwari, Mazuva maviri asati rechi19 rokuzvarwa. Hapana anonzi mashoko anokurudzira akanga anobatsira nokuti mubvunzo chikuru tose anazvo zvakanga, ” Sei iye, aingovawo 'mwana?” asi, pashure tinotarisa kumashure uye kuona kuti kunyange zvazvo zvakanga inosuruvarisa chiitiko yakabereka mhuri yedu pedyo pamwe chete uye aongorore patsva ukama hwedu mumwe nomumwe uye naMwari. Nesuwo zvakawana nhengo yemhuri itsva kwete nokukurumidza pashure mu mwanasikana wake, vaigona kuva mapatya yake.
Angie • Gumiguru 3, 2013 pa 5:03 pm • pindura
I saka aifanira kuverenga kodzero iyi zvino. Mwari vakukomborere.
CynthiaAghomon • Gumiguru 4, 2013 pa 1:09 pm • pindura
Izvi saka encouraging..God haana kumbokundikana uye haana kuda kutanga chero children..we ake chete vanofanira kuchengeta tariro mupenyu uye vanodavira kuti Haazombosiyi isu kana kutirasha. Romans 8:18 anoti nokuti ndinoona kuti matambudziko ino nguva haana kufanira kuenzaniswa nekubwinya kuchazoratidzwa us..amen
ehe • Gumiguru 10, 2013 pa 1:59 pm • pindura
Asi zvakare, I Warigirwa mumwoyo!Ndinorwara panguva uye ndakanga nei Jehovha akanga achiita zvinhu izvi zvakaitika kwandiri. In kubhoekana kwangu achigura nemuminda FB mapeji chandinonamatira CELEBS uye ini mahwekwe website yako. Maiwe! Jehovha akapindura munyengetero wangu uye akataura zvakananga neni! (kuburikidza Trip) Zvakafanana Trips mashoko yakadekara chete ini (Nokuti Mweya Mutsvene kumushandisa kuzoshumira kwatiri)….Mwari nguva dzose Anotuka ini kubudikidza naye (mumhanzi yake,Blog mbiru uye mharidzo) Ndinofunga rakanga kutaura kune zvakawanda pamusoro hotera ichi kuti haisi musha wangu. Saka iye zvino ndava kuziva kuti sei ndiri kurwara (chii Ishe ari kuedza kundidzidzisei mumuedzo uyu)…Mwari arambe akuropafadzei rwendo Lee, zviri zvinoshamisa kuti ushumiri hwako rinoitwa kwatiri (yavatsvene Africa) uye kunyange isu kumboonana, Ndinonzwa sokuti ndinoziva iwe pachako nekuti ndinogona kunzwisisa zvose zvaunotaura. Uye nekuti mumhanzi wako zvechokwadi Anorairira, rinokurudzira, Rinoruramisa, ini rinodzidzisa!….. Stay wakakomborerwa!!!!!!!!!
pelumi • Mbudzi 3, 2013 pa 10:03 pm • pindura
KevinSteele • Mbudzi 7, 2013 pa 9:02 pm • pindura
“Kuzvininipisa kwedu kupfuura rufaro rwedu.” Kuti chaizvoizvo andirova murume. Rambai kuita kuti zvakanaka mumhanzi uye Mwari ropafadzai.
sherice • Zvita 2, 2014 pa 9:53 pm • pindura
Ndiri vanoonga uye akakurudzirwa ichi…ameni!